သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်: Happy Birthday My Dear Little Bro:!
Happy Birthday My Dear Little Bro:!
Happy Birthday! (၁၆-မတ်-၂၀၀၈)
ပျော်ရွှင်ခြင်းများစွာ၊ ဘ၀အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံသော ငြိမ်းချမ်းသောဘ၀လေးကို ချစ်သောသူများနဲ.အတူ ပို်င်ဆိုင်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းချွေလျှက်....။
Posted by tg.nwai at 6:54:00 PM